iPhone Naanị ebubo na laptọọpụ ma ọ bụ ụgbọ ala, ọ bụghị mgbidi ahụ: Idozi! - Nchaji
ipad agaghị agbanye mgbe emelitere ya
ekpere siri ike maka okwu ikpe
kedu ka m ga -esi mee iphone m ada ụda
kedu ihe mere ekwentị m anaghị ejikọ na data
iPhone Naanị ebubo na laptọọpụ ma ọ bụ ụgbọ ala, ọ bụghị mgbidi ahụ: Idozi!
Gị iPhone na-akwụ ụgwọ mgbe ọ na-agbanye n'ime ọdụ ụgbọ USB na laptọọpụ gị ma ọ bụ ụgbọ ala gị, mana ọ naghị akwụ ụgwọ mgbe ọ jikọtara ya na chaja mgbidi. Huh? Tried nwalela eriri dị iche iche na chaja dị iche iche, mana iPhone gị agaghị akwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na agbanye ya na ntanetị. N'isiokwu a, m ga-akọwa ihe mere iPhone gị agaghị akwụ ụgwọ mgbe ejikọtara ya na ntanetị , gbalịa ịkọwa ihe gịnị kpatara ọ mere, ma kọwaa ebe a ga-edozi nsogbu a.
Ọ bụrụ na iPhone gị agaghị akwụ ụgwọ ma ọlị , lelee edemede m akpọrọ My iPhone agaghị akwụ ụgwọ ịchọta enyemaka ị na-achọ.
Ekpebiri m ide edemede a mgbe mmadụ abụọ jụrụ m otu ajụjụ ahụ kpọmkwem na Payette Forward Community. Emere m ụfọdụ Googling ma chọpụta na ọtụtụ ndị enwewo nsogbu a, mana ahụbeghị m azịza ọ bụla. Nke a bụ otu nsogbu si ewetakarị onwe ya:
“IPhone m anaghị akwụ ụgwọ mgbe ọ jikọtara ya na chaja mgbidi. Ọ na-akwụ ụgwọ naanị mgbe ejikọtara ya na laptọọpụ ma ọ bụ chaja ụgbọ ala m. Agbalịrị m ịpụpụ eriri na chaja mgbidi, mana ọ nweghị ọdịiche.
Na mbụ echere m na ọ bụ esemokwu na eriri nke atọ ma ọ bụ chaja mgbidi, mana ọ bụghị ya. Mmadu abuo na-eji eriri na chaja ejiri akara Apple. Iji mee ihe ọbụna Ọzọ mgbagwoju anya, otu eriri na chaja ndị na-arụghị ọrụ na iPhone ha rụrụ ọrụ n'ụzọ zuru oke ya na iPhones ndi ozo.
Nke a bụ a tricky nsogbu dozie. Amaara m na ọ ga-abụrịrị ọdịiche dị n'etiti ịchaji iPhone na mgbidi ma na-akwụ ụgwọ ya na kọmputa, mana gịnị ka ọ bụ? Kọmputa, ụgbọ ala, na chaja mgbidi iPhone pupụtara na 5V (volts), mana emesịrị m chọpụta na ha abụghị kpom kwem otu ihe.
Eletrik N'ihi The Electrically-Aka
Enweghị m nghọta dị elu banyere ọdịdị nke ọkụ eletrik, mana otu mgbe m gụrụ ihe atụ nke nyeere m aka ịmalite ịghọta echiche nke voltaji na amperage. Lee ya ebe a:
Ọkụ eletrik na-asọ site na waya dị ka mmiri na-asọba n'ogige ogige. Akara nke sooks dị ka amperage, na ọ na-ekpebi oke mmiri ma ọ bụ ọkụ eletrik nwere ike ịfefe na sooks n'otu oge. Nrụgide nke sooks dị ka voltaji, na ọ na-ekpebi nrụgide nke mmiri ma ọ bụ ọkụ eletrik nke na-abanye n'ime ngwaọrụ gị.
Ọ bụ na ha niile 5 Volt chaja abụghị otu?
Igodo nke iji dozie nsogbu a bụ na nghọta nke ahụ ọ bụghị chaja 5V niile bụ otu. Ihe dị iche n’etiti chaja abụghị voltaji. Ọ bụ amperage.
The iPhone mgbidi chaja, Laptọọpụ, na
IPhone gị enweghị ike ijikwa amperage nke mgbidi gị (1 amp +), mana ya nwere ike edozi amperage nke ụgbọ ala gị na laptọọpụ chaja (500mA). Dabere na ụfọdụ mkparịta ụka ngwa ngwa mụ na ndị ọkachamara nwere, nke a nwere ike ịbụ n'ihi nsogbu na ike input njikwa circuit, ma ọ bụ voltage njikwa .
Emere iPhones dakọtara na chaja site na 500mA rue 2.1A iPad chaja . My tiori bụ na sekit n'ime gị iPhone na ọdịiche dị n'etiti amperages e mebiri emebi, otú gị iPhone na-anabata ndị kasị ala-ekwe omume ego. Otú ọ dị, nke a bụ nanị tiori.
Nwere ike iPad chaja na-emebi iPhone m?
Emela iPhone ka aka na amperages dị elu karịa 500mA ma ọ bụ 1A wepụtara site na chaja mgbidi. Apple chaja 12V iPad na-ewepụta 2.1 amps ma dakọtara na iPhone ọ bụla dị ka Apple si ukara nkọwa .
Ebe amperage na-ekpebi ego ọkụ eletrik na-erugharị na waya, nke ka elu amperage ahụ, ngwa ọrụ gị na-ebu ngwa ngwa. iPads ga-akwụ ụgwọ site na iji chaja iPhone, mana ha ga-akwụ ụgwọ okpukpu abụọ ma ọ bụrụ na ị na-eji chaja iPad dị elu amperage. Agbanyeghị, ụfọdụ ndị ọkachamara kwuru na ịchaji batrị lithium-polymer na amperages dị elu nwere ike belata ndụ ha niile.
Kedu ka m ga esi edozi iPhone nke na-agaghị akwụ ụgwọ mgbe etinye ya na mgbidi ahụ?
O di nwute na, ozugbo ihe ike eletrik na-achịkwa circuit emebi na iPhone, ọ nweghị ihe ị nwere ike ime n'ụlọ iji dozie nsogbu ahụ. Ma, ị bụghị kpam kpam nke chioma.
Ọ bụ ezie na chaja mgbidi 1A Apple agaghị arụ ọrụ, ị nwere ike zụta chaja 500ma na Amazon na-ewepụta ihe amperage gị iPhone nwere ike nabata. Ọ bụghị azịza zuru oke, mana ọ dị ezigbo mma karịa dochie iPhone gị dum.
Okwu ịdọ aka na ntị: Enwebeghị m onwe m nwalere chaja Amazon 500ma na iPhone na ọnọdụ a, naanị n'ihi na enweghị m nsogbu a. Adịghị m 100% jide n'aka na 500mA mgbidi chaja ga-arụ ọrụ, mana echere m na ọ bara uru ịnwale $ 5. O kwa inwale ya, biko mee ka m mara otu osi aputa!
Ọ bụrụ na ị nọ n’okpuru ikike, njem ị ga-aga Genius Bar na ụlọ ahịa Apple dị n’ógbè gị nwere ike ịdị n’usoro.
iPhone & Mgbidi: Ọnụ ọzọ
Anyị ekwuola ọtụtụ ihe na isiokwu a, ma ugbu a, ị maara na gị nwere ike kwụọ ụgwọ iPhone gị na mgbidi, ọ bụrụhaala na ị na-eji chaja 500mA. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmụtakwu ihe dị n’ime chaja iPhone, ihe ederede miri emi a zuru akwa-ala nke gị iPhone chaja . E nwere ọtụtụ teknụzụ jupụtara na obere plọg ahụ!
Anụla m site na ụfọdụ ndị na-ekwu na ndụ batrị ha yiri ka ọ kara njọ kemgbe ha hụrụ nsogbu a na mbụ. Ọ bụrụ na ị na-alụ ọgụ na nke ahụ kwa, isiokwu m banyere otú ịzọpụta iPhone ndụ batrị nwere ike inyere aka nke ukwuu.
Ọ ga-amasị m ịnụ ahụmịhe gị na ịtụnye iPhone gị na mgbidi, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịmeela nsogbu a. Ọ bụrụ na i kpebiri